खानेपानी सुधार आयोजनालाई ४ अर्ब ८१ करोड अनुदान
As of Tue, 02 Jun, 2020 13:45
जापान सरकारले नेपालमा खानेपानी सुधार आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि ४ अर्ब ८१ करोड अनुदान रकम उपलब्ध गराउने भएको छ । नदीको पानी प्रशोधन गरेर पिउन योग्य बनाउन सञ्चालन हुन लागेको आयोजनालाई जापानले ४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउन लागेको हो ।
नेपाल खानेपानी संस्थान र निर्माण कम्पनी हाजमा एन्डो कर्पोरेसनबीच पोखराको मर्दी खोलाको पानी शुद्धीकरणका लागि सम्झौता भएको छ । संस्थान र हाजमा कम्पनीबीच भएको द्विपक्षीय सम्झौतामा पोखराको मर्दी खोलालाई प्रशोधन गरेर शुद्धीकरण गरिने र पिउनका लागि योग्य बनाइने उल्लेख छ । पोखरा क्षेत्रको खानेपानी सुधारका लागि जापान सरकारले नेपाल सरकारलाई अनुदान स्वरुप ४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने सम्झौता भएको थियोे । यो अनुदान रकम सिभिल ठेक्काका लागि दिइएको संस्थानले जनाएको छ । जापानले दिएको कुल अनुदान रकममध्ये ४ अर्ब २१ करोडमा सिभिल कार्यका लागि जापानमै बोलपत्र आह्वान भएको थियोे । जसमध्ये हाजमा कम्पनीले अनुमानित लागत रकमभन्दा ८.२ प्रतिशत कममा बोलपत्र कबोल गरेको थियो ।
संस्थानको तर्फबाट महाप्रबन्धक डा. भूपेन्द्रप्रसाद र कम्पनीको तर्फबाट प्रोजेक्ट म्यानेजर हिदेकी ओइसीले सम्झौता गरेका हुन् । खानेपानीको क्षेत्रमा यो नै अहिलेसम्मकै ठूलो आर्थिक सहयोग भएको महाप्रबन्धक डा. भूपेन्द्रप्रसादले बताए । “यति धेरै रकम १३ वर्षको प्रयासपछि पहिलो पटक नेपालले प्राप्त गरेको छ,” उनले भने, “सम्झौताअनुसार प्रतिदिन ४ करोड १० लाख लिटर पानी प्रशोधन गर्ने प्लान्ट मर्दी खोलामा राखिने छ, खानेपानी आपूर्तिका लागि १ सय किलोमिटर पाइप बिछ्याइने छ । ”
उनका अनुसार खानेपानी भण्डारण गर्न ३ वटा पानी पोखरी निर्माण गरिनेछ । पोखरा खानेपानी सुधार तथा विस्तारका लागि याचियो इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले विस्तृत डिजाइन गरेको थियो ।
सुदूरका सरकारहरुलाई सवा ४४ अर्ब अनुदान विनियोजित